Ukunethezeka kwesimanje edolobhaneni elingokomlando le-Co Down. - I-Airbnb
Ukunethezeka kwesimanje edolobhaneni elingokomlando le-Co Down.
Ifulethi elihlanzekile, eligqamile nelihehayo phansi, amagumbi okulala amabili amabili, 1 anendlu yokugezela ehlukile. Itholakala enkabeni yedolobhana elingokomlando lase-Saintfield elaziwa ngezitolo zezinto zakudala nezekhofi. Izingadi ze-Rowallen ziqhele ngebanga elifushane
Ifinyeleleka kalula kusuka e-Belfast lesi yisizinda esihle kakhulu sokuhlola i-County Down. Ngezitolo eziningi, izindawo zokudlela nama-bar asemnyango ngeke ube mfushane ngezindlela zokugcwalisa izinsuku zakho noma kusihlwa.
Buza mayelana nelinye ikhaya lethu eliseduze.
Ihlanzekile futhi ingeyesimanjemanje, leli fulethi eliphansi linikeza ukufinyelela kwezinga elilodwa kuyo yonke indawo, linendawo eyakhiwe ohlelweni lokuhlunga umoya futhi ineminyango ephindwe kabili yase-France eya ngaphambili nangemuva kwendlu evumela ukukhanya kugcwale amanzi. Indlu inehholo lokungena elizimele eliholela endaweni evulekile yokuhlala nokudlela. Ngaphandle kwalokhu ihholo langaphakathi elivulekela ekhishini elifakwe ngokugcwele, igumbi lokugezela elinobhavu, i-ws nomcengezi, ekugcineni kunamakamelo okulala amabili aqhakazayo ngalinye linemibhede ephindwe kabili enomatilasi we-orthopaedic. Ikamelo lokulala elikhulu lineminyango ephindwe kabili yase-France kanye negumbi leshawa langasese.
Ihlelwe enkabeni yedolobhana ifulethi liqhele ngebanga elifushane kusuka ezitolo, amathilomu, izindawo zokudlela zama-bar kanye nomtapo wolwazi wendawo.
Ukushayela ngqo emgwaqweni kukuyisa e-Belfast kodwa kuningi ongakubona e-Co Down ukuthi imoto izoba yimpahla yokuvakashela e-The Mournes, noma e-Killyleagh Castle ukuze uyiqambe ngamagama ambalwa.
I am an artist working and living in Northern Ireland, I am a mum to three boys and I'm very passionate about travelling so I know the importance of a good host. I take pride in my home and surroundings and wish for my guests to feel as comfortable with me as they are in their own home. I am at hand to guide and accommodate my guests as much or as little as they like and will do all that I can to help tailor your trip to meet your highest expectations.
I am an artist working and living in Northern Ireland, I am a mum to three boys and I'm very passionate about travelling so I know the importance of a good host. I take…
U- kanye nomsizi wami bahlale bejabulela ukwamukela izivakashi ezintsha. Siyakujabulela ukuhlangana nabantu abasha nokuthola ukuthi bavelaphi noma bahambe kuphi. Ngenxa yalokho, siyakujabulela ngokuphelele ukuvumela izivakashi zizizwe zisekhaya futhi zijabulele ukuthola indlela yazo. Kuzohlala kunothile otholakala ngomyalezo ukuphendula noma yimiphi imibuzo, ukunikeza iseluleko noma ukusikisela izindawo ezithakazelisayo ongazihlola.
U- kanye nomsizi wami bahlale bejabulela ukwamukela izivakashi ezintsha. Siyakujabulela ukuhlangana nabantu abasha nokuthola ukuthi bavelaphi noma bahambe kuphi. Ngenxa yalokho, si…